I-intanethi ividiyo incoko amagumbi Dating - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Free: ezintathu imidlalo ukuba familiarize kwabo ne-Non-Violent Zonxibelelwano kwi-usapho
Kwaye xa yakho kufuneka ka-yindlala ngu izifuno.")
Kengoko rhoqo aqonde ukuba singaba violent kunye amazwi, okanye abe violent ngokuchasene mna
Inkqubo nonviolent unxibelelwano (NVC) intended ukuthobela zonke iintlobo zobomi.
Kubalulekile ukuba azise mna nezinye hayi umthetho ngokusebenzisa uloyiko isohlwayo, inzala ka - umvuzo okanye guilt, kodwa ukususela injongo ukuqonda kwaye kuhlangana iimfuno wonke umntu.
Sinako zama ukuba abe appreciative le eyobuhlobo unxibelelwano kangangoko kunokwenzeka ngo-ungquzulwano: ingaba yintoni mna ube ujonge ukuba abe idibene ne-kwam kunye nezinye kunye mna ndikuye ungquzulwano kuthi ukwenza ubomi ngakumbi elimnandi.
Umzekelo: Xa kufuneka crossed i-street ngaphandle ujonge, ndandisoyika kwaye mna kufuneka zikhathalele ngokwakho.
Ndicela wena t-ukumisa ixesha ngalinye ngexesha pedestrian crossing kwaye jonga akunjalo ke ekhohlo phambi crossing. Ulawulo kwinkqubo Non-Violent Unxibelelwano ifuna upstream umsebenzi kwi amanqaku ka-zimvo kwaye ifuna, ngokunjalo nako aqonde umyalezo ngokudlulela umyalezo ukuba sibonisa imfuneko. Ushicilelo uluhlu uvakalelo kwaye out kwi-imilo ka-amagqabi umthi (a evakalayo corresponds kwi-ikhasi) Ezi zimbini imithi amele oluntu: lokuqala xa ifuna ingaba uvuma, wesibini xa ifuna ukuba abakho ke kuhlangatyezwana nazo. Nibe ukubhala kwi-trunk wokuqala"Xa wam iimfuno kuyahlangatyezwana nazo"kwaye trunk wesibini"Xa wam iimfuno asingawo ekubeni zahlangana". Zichaza ukuba zonke uvakalelo ukukhonza ukuba ulwimi kwi iimfuno: glplanet uvakalelo malunga neemfuno uvuma, kwaye unpleasant uvakalelo malunga unmet iimfuno (uyakwazi buza abantwana imibuzo:"uziva Njani xa yakho kufuneka batye yanelisekile kwinto yokuba. Thatha iphepha kwakanye: ukufunda ndinovelwano ukuba kwathiwa kuyo, azibandakanye a ngxoxo kule ndinovelwano, mimic, jonga kwiimeko apho oku ndinovelwano waba experienced. Xa lo msebenzi kwi amanqaku kwenzeka, gqiba ukuba kunye xa oku ndinovelwano ukelele: xa kufuneka yanelisekile kwinto yokuba, okanye xa kufuneka ngu unsatisfied. Yintoni imizekelo kwixesha elidlulileyo, okanye eboniweyo idlalwe kwi ibali. Kuxhomekeke impendulo, cola amagqabi kwi isebe lokuqala umthi, kwi sebe lwesibini umthi. Vumela abantwana ukuba decorate, coloring, ngokusesikweni iphepha (umzekelo, umbala zibe eyabelwe emotions glplanet nezinye kunye unpleasant emotions kwaye ke degrade ezi imibala ngokunxulumene ubunzulu - ndinovelwano).
Ndiyabulela kuba zonke ezi izimvo
Oku abancinane mdlalo ukuchonga ezinye iimfuno zethu, ukuhlola kangakanani ezi ingaba uvuma, kwaye ukubona indlela kudla unfulfilled iimfuno. Ndicebisa ukuba kopa maps ka iimfuno ezibangela ukuba ukususela Non-Violent Unxibelelwano (ezimbalwa ezisisiseko ifuna ukuba kusidudulela bonke): amakhadi iimfuno umdlalo CNV babe ukudlala lo mdlalo yedwa okanye nabanye abantu, kwaye zoba njengoko abaninzi amakhadi kangangoko ufuna. Abantwana (ukusuka ezintandathu ubudala) ngokunjalo abadala unako dlala: abantwana babe abasweleyo ka-iinkcazelo kunye imizekelo ukucacisa intsingiselo ethile iimfuno. Sidinga aqonde zethu unmet kufuneka zithungelana nabanye abantu, hayi NGOKUCHASENE nesinye: izigwebo, criticisms, diagnoses kwaye iinkcazelo kwelinye, ingaba zonke yenza ingxenye yesakhelo diverted ukusuka iimfuno zethu. - Marshall Rosenberg Zithungelana ezingeyo-violent unxibelelwano ufuna nathi ukufumana unmet kufuneka ukuba fihla ngasemva ngamnye wethu judgements, ngenxa yokuba iimfuno ingaba ubomi ezama intetho. Ukususela mzuzu abantu bathethe zabo iimfuno kunokuba i-wrongs abanye abantu, uba kakhulu lula ukufumana iindlela yanelisa wonke umntu. - Marshall Rosenberg, sinako ukuqeqesha ngokwethu, na umdlalo, ukuzama guess iimfuno ukuya kwilizwe lakhe nawuphi na umyalezo. Oku akunakho discern iimfuno abanye ngu nezibalulekileyo ukubaluleka kwi-ingxabano isisombululo: Ngamnye umyalezo, nokuba yayo umxholo okanye yayo ifomu, intetho ka-a uncedo. - Marshall Rosenberg Lo mdlalo iphenjelelwe ukusuka incwadi Abazali respectful abantwana respectful ka-Surah Hart kwaye Adelaide Kindle Hodson.
Ngamnye nxaxheba efumana ezindlebeni a omnyama kwaye girl (ukuba kushicilelwa encwadini ezikhankanyiweyo, ukuthenga cv okanye putting izandla bzabanye kuba girl kwaye yakhe fists clenched kuba omnyama) facilitator (preferably i-omdala ngubani ngobukho NVC) baya konyulwa kwaye kuyicacisa le zine iindlela ukuva umyalezo ngokunxulumene Non-Violent Unxibelelwano (NVC): facilitator inika imizekelo ulwimi omnyama kwaye girl kwaye abathathi-nxaxheba kufuneka ubeke iindlebe zabo ukuze zibonakalise ulwimi olusetyenziswa.
Umzekelo: xa oku utyelelo sigqityiwe, facilitator distributes ezindlebeni a omnyama ukuba umntu kwaye ezindlebeni a omnyama komnye. Nganye kuzo zabo, jika, nabanye abathathi-nxaxheba kuthetha kunzima umyalezo ukuva (a isihlalo, criticism, reproach, ngolwimi omnyama). Umntu owenza wakhe ezindlebeni omnyama uphendula kuqala nge iindlebe waguqukela ngakulo omnye, kwaye kwangoko kunye iindlebe waguqukela ngakulo ngokwayo. Kwaye ke umntu owenza wakhe ezindlebeni girl uphendula kunye iindlebe waguqukela ngakulo omnye, kwaye kwangoko kunye iindlebe waguqukela ngakulo ngokwayo.
Umntu unako qinisekisa ezinye variants: onke amalungu wear ezindlebeni giraffes, kwaye kufuneka ukuphendula ngolwimi girl ukuba umyalezo aggressive yamiselwa yi-moderator uyakwazi invent a dialogue apho ngamnye somlomo wakhe ezahlukeneyo ezindlebeni (enye na ukuthetha ukuba ulwimi omnyama kwaye enye kuphela ngolwimi girl) okanye invent a dialogue apho ngamnye somlomo carries efanayo ezindlebeni (okanye omnyama okanye girl) kwaye ke sinako xoxa neeyantlukwano kwaye iziphumo wabhala ngokunxulumene uhlobo ulwimi olusetyenziswa.
Ezi ezintathu abancinane imidlalo kukhokelela amancinane (ukusuka ezintandathu ukuya ezisixhenxe ubudala), kwaye omkhulu ukuba senzo NVC. Banako kunikelwa kwi-classroom kwaye ekhaya ukuba wazivusa abantwana kwaye adolescents non-violent unxibelelwano, usapho okanye kwa kulo mcimbi. Ukuya ngaphezulu, incwadi kukuba Umzali-eyobuhlobo, umntwana-eyobuhlobo (iintlelo La Découverte) inikeza ezininzi eminye imidlalo ukuba ukuziqhelisa kunye abantwana nyusa yokwazisa malunga non-violent unxibelelwano. Ezibalaseleyo site iluncedo kakhulu ngenxa yam imisebenzi intloko Yesebe Parenting. Kufuneka ukhangele kunye isifrentshi association kuba Non-Violent Unxibelelwano. Kungenjalo, kukho izikhokelo ukuba out encwadini ukuba mna umzekelo-icatshulwe kwi-inqaku. Kuyenzeka ukuba ukubuyiselwa i-jikelelela ezi amanyathelo kwaye dedicate indawo i-classroom okanye ekhaya oku isithuba kuba clarification ukuba yintoni eyenzekayo kwi-kwethu. I abadala ngokunjalo abantwana ayikwazi yiya xa baye bazive overwhelmed yi-babo bube emotions kwaye baya kufuneka lekhefu ukuze kugxila zabo emotions kwaye iimfuno zabo.
Free: ezintathu imidlalo ukuba familiarize kwabo kunye Unxibelelwano, Hayi Violent kusapho.
Musa bhalisa Dating kunye ifowuni kwaye iifoto kuba free kwi-Yangzhou isixeko
Okwangoku, ubhaliso ngaphandle intlanganiso kunye "Nesiqingatha Yangzhou "iwebhusayithi ngu simahlaOmtsha acquaintance uya kunikela indlela entsha ukufumana kule ndawo kule inombolo yefowuni kuxhomekeke ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka ukwabiwa kwaye pooling ka-ulawulo zokusebenza. Polovinka Dating site kwaye ubhaliso kuba free, ngaphandle iifoto, ifowuni amanani nokhuseleko iinjongo awunakuba kuhlangana. Nesiqingatha i-Dating zephondo kunye iifoto, ifowuni amanani nokhuseleko iimpahla awunakuba kuhlangana, ubhaliso ifumaneka simahla. Polovnka site 100 free (registration), nazo zonke iinkonzo kwi inxuwa, yonke imini kukho entsha iintlanganiso kwaye abathatha inxaxheba kwi-yenza isangqa ka-acquaintances. Namhlanje ungasebenzisa i - "Ncwadi" inkonzo-lo ifowuni inani kubekho inkqubela kwaye boy kwi-photo, esibizwa kanjalo ekuthiwa.
Free Dating abantu kwaye Hamburg (isixeko Hamburg) yi-German Dating kwisiza
Umina kanjalo dyeti3dyivchoki1 boy molo
UTB intlaninge yeenkwenkweziname Patamushta dietiti UTB uthando jewels Nada cigar cinema akukho inzala Jo Unio deitiesmolo, ezinzima kuza, ukuba akunjalo, anomdla kakhulu ezinzima ubudlelwane kunye nosql database, entliziyweni s kuba kakhulu ezinzima budlelwane intlanganiso ixesha. Apha kwi Dating inkangeleko unmarried abantu ukusuka Hamburg ingaba ebhalisiweyo for free.
Usebenzisa i-intanethi Dating site kuba abantu kwi-Hamburg
Emva kokuba ubhaliso, ufumane imizuzu embalwa ukufikelela kwaye unako incoko kunye abantu kwaye guys. Manenekazi na manene, ithemba, uthando ngakumbi, ifumana watshata kwaye yokufumana watshata Hamburg isixeko, fun imihla.
Nokwakha ubudlelwane kunye divorced umntu
Indlela ukwakha ubudlelwane kunye umntu freshly divorced
Yintoni amaqhinga ukuqonda yakhe ufakelo yakhe elidlulileyo kwaye hayi koxinzeleloKulomboniso ndithetha kuwe a imeko okokuba ndiya rhoqo encounter kwi-coaching, oku xa ufuna seduce umntu othe nje divorced kwaye ngubani na kanti ngokupheleleyo ikulungele ukusebenza kuyo ibali. Uziva kwi defensive, kwaye ngamanye amaxesha nkqu suspicious.
Kuba oku, nceda ufowunele kuza uze udibane wam site
Yena ezama ukuba reassure ngokwakhe, kodwa kufuneka i-impression ukuba akekho kukunika zonke yakhe trust. Wam imbono kukuba uncedo ukuze uqonde wokuqhawula umtshato kuba hayi ngokulima iimpazamo kwaye kwi ephikisana i-kuzisa kakhulu kuwe.
Ngakumbi, umntu uya kuba kunye ngakumbi uza kuba ithuba ukuba ukho ngokupheleleyo invested yakho ibali.
Ngoko ke, eli lixesha elihle ukufunda indlela ukwakha ubudlelwane kunye divorced umntu, ukuqonda indlela athimba ngayo ngaphandle koloyiko kwaye eseleyo ngokwakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ufowunele cela kum kwi-izimvo, ndiya kuba ndonwabe ukuphendula kuwe.
Girls, ukhuphele umsinga Girls
le yindlela elungileyo enye wefilim
Ngomhla wakhe th umhla wokuzalwa, i-blonde Inken meets yakhe ababini Vicki kwaye Lena kwi-locker igumbi wakhe volleyball iqelaLe sekupheleni, abathathu kubo mamela njengoko i-imaginary Cheyenne-umdlali kwi opposing iqela-meets a kubekho inkqubela kuzo ngaphambili abo boasts wakhe orgasmic abilities. Kungekudala eli qela ezintathu uza kuphulukana nayo i-i-cayenne. Kuba yakhe umhla wokuzalwa, Inken ufumana ividiyo ukusuka Vicky Umama, a ngesondo therapist, apho abafazi amava orgasms. Kunye surprise ka-girls ukuphunyezwa yi kakuhle ngokupheleleyo yokuphepha. okanye ukhethe enye umsinga yemikhosi ligama, kunjalo, ngokupheleleyo useless. Ezona ethandwa kakhulu ukusingatha nkonzo ifumaneka Uploadend, apho ikwafumaneka ulk.
Zonke streams bakhululekile kwaye unako zijongwe ngoko nangoko kwi-intanethi.
Apho kukho abalimi lwamaxwebhu
Landela imiyalelo i-imeyili, kwaye unoxanduva sele kuluhlu
Lunika iindaba malunga zethu imisebenzi, amakhonkco ukuba sele ipapashwe amaxwebhu, iiprojekthi zexesha elizayo, njalo-njaloUkuba ufaka seriously anomdla, uyakwazi thumela amaxwebhu simahla ngeposi ebhalisiweyo kwi-uluhlu lokuposa apho sino zethu ngxoxo izicwangciso.
Olu luhlu ngu-vula wonke umntu, kwaye ubhaliswe i-imeyili simahla.
Thumela i-imeyili apha: umrhumo kunye amazwi noba njengoko umxholo, okanye njengoko lokuqala kuphela umgca kwi umyalezo okubhaliweyo.
Kungenjalo, unako kanjalo usebenzise ifomu kwi-site: whichever indlela usebenzisa, uza kufumana i-imeyili apha: ukusuka catalog ngaphakathi imizuzu embalwa. Kukho kwakhona umyalezo ujongano kuba oku nezinye Franks enxulumene ne-uluhlu lokuposa. Ngamanye amaxesha ayithethi ukuba umsebenzi kakuhle kakhulu okanye akuthethi ukuba umsebenzi ngawo onke, nangona oko kuyanqaphazekaarely ingaba. Andikukhuthazi umda kuba ithumela imiyalezo, kodwa kuba sendawo yokugcina kwaye ingxowa-yintoni ngokwenene elihle. Ukuba yonke imiyalezo khona ingaba esiza kumncedisi, kufuneka elungileyo imbali phambi ngabo obandakanyekayo kunye. kwaye ukufumana uluhlu amaqela. Bhala babuza ad amaqela.
Free kids movies and TV shows with Tube that you can watch online
omdala Dating ubhaliso free ungathanda ukuba ahlangane ads esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela-intanethi ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko-intanethi usasazo ngaphandle ubhaliso i-intanethi incoko ngaphandle ividiyo ividiyo fun kuba abantwana ividiyo Dating site free qinisekisa ividiyo Dating nge-girls erotic ividiyo iincoko